Kudya Kwekuchengetedza Fekitori - China Kudya Kwekuchengetedza Vagadziri, Vatengesi
Escherichia coli O157: H7 (E. coli O157: H7) ibhakitiriya rine gramu-risina kunaka rejenasi inonzi Enterobacteriaceae, inoburitsa huwandu hwakawanda hwehuturu hweVero.
Norovirus (GⅠ) RT-PCR Yekutsvaga Kit
Inokodzera kubatwa kweNorovirus (GⅠ) muhove, mbishi miriwo nemichero, mvura, tsvina, kurutsa uye zvimwe zvienzaniso. Nucleic acid kuburitsa kunofanirwa kuitiswa neniconic acid yekuburitsa kit kana yakananga pyrolysis nzira zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemhando.
Norovirus (GⅡ) RT-PCR Yekutsvaga Kit
Inokodzera kubatwa kweNorovirus (GⅡ) muhove, mbishi miriwo nemichero, mvura, tsvina, kurutsa uye zvimwe zvienzaniso.
Salmonella PCR Yekuona Kit
Salmonella ndeye Enterobacteriaceae uye Gram-isina enterobacteria. Salmonella chirwere chakajairika chinotakurwa nechikafu uye masosi ekutanga mune hutachiona hwechikafu.
Shigella PCR Yekuona Kit
Shigella rudzi rwegram-negative brevis bacilli, iri yezvirwere zvemukati, uye chirwere chakajairika chevanhu bacillary dysentery.
Staphylococcus aureus PCR Kutsvaga Kit
Staphylococcus aureus ndeye genus Staphylococcus uye iri gram-yakanaka mabhakitiriya. Iyo yakajairika chikafu-inotakurwa pathogenic microorganism iyo inogona kuburitsa enterotoxins uye kukonzera chikafu chepfu.
Vibrio parahaemolyticus PCR Kutsvaga Kit
Vibrio Parahemolyticus (inozivikanwawo saHalophile Vibrio Parahemolyticus) iGram-negative polymorphic bacillus kana Vibrio Parahemolyticus. Nekutanga kwakanyanya, kurwadziwa kwepamuviri, kurutsa, manyoka uye chigaro chine mvura sezviratidzo zvekiriniki.